2012 | မိုးဇက်
Posted on Friday, 30 November 2012
~ မိုးဇက် ~
တစ်ချက်တစ်ချက်ထိမ်းချုပ်မဲ့ အလွမ်းတွေထွတ်ကျလာတာများ မြင်မကောင်းဘူး မာယာ
ဘယ်ဘက်ရင်အုံမှာ ထိုးထားတဲ့ တတ်တူးစာလုံးက
“ မာယာ ” တဲ့ ...
~ မာယာဖြူ ~
ငါ့ရင်ခုန်သံတွေ နှစ်မြုပ်ခံလိုက်ရတာ မင်းသိရဲ့လား မိုးဇက်ရယ်
ကိုယ့်အာရုံကိုမှ ဘာလို့နေ့တိုင်းရစ်ပတ်နေတာလဲ မာယာ
မင်းစိတ်ကို ကိုယ်အကြိမ်ကြိမ်ဖတ်ကြည့်နေမိတယ် ...
မင်းဆီကို ရောက်အောင်လာခဲ့မယ် မာယာ ....
( မာယာဖြူ နှင့် ကျွန်တော် တသီးတသန့်ဖွဲ့ဆိုဖြစ်တဲ့ ကဗျာတစ်ပုဒ်ပါ )
Posted in ထိရှအက်ကွဲသံ | 13 Replies
တိတ်ဆိတ်သောသီချင်းတစ်ပုဒ်ကို သူမနှင့်ကျွန်တော် ရွတ်ဆိုခဲ့
Posted on Tuesday, 27 November 2012
နှင်းစတွေဖွေးဖွေးလှုပ်နေတဲ့ နိုဝင်ဘာ မနက်တစ်ခုမှာ
ခံစားချက်ကိုယ်စီနှင့် ချရေးနေမိတယ် ။ ။
ကဗျာအစပိုင်းကို ကျွန်တော် ထရွတ်လိုက်တယ်
သူမ ရဲ့ဖွင့်ဟဆိုမှု အပိုဒ်အရောက်
ငြိမ့်ငြိမ့်သွဲ့သွဲ့လေသံ တစ်ချို့ကို လိုသလို
ဟော ကီးကလွဲနေပြန်ပီ မေနို
သူမ နှင့် ကျွန်တော် အကြည့်ချင်းတချက်မျက်နှာချင်းဆိုင်လိုက်တယ်
သူမ မျက်လုံးထဲကို ကျွန်တော့ ခံစားမှုတွေ ပြစ်ထဲ့လိုက်တယ် ..
ကျွန်တော့ အတွေးထဲကို သူမရင်ခုန်နှုံးတွေ ခပ်ထည့်လိုက်တယ် ..
တိတ်ဆိတ်မှုရဲ့ အောက်မှာ စကားသံတွေအများကြီးပြောဖြစ်ကြတယ်
အဲဒီအထဲမှာပဲ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုရ သိပ်ကိုခတ်တဲ့
ချစ်ခြင်းတွေ သူမနှင့်ကျွန်တော် သံပြိုင်ရွတ်ဆိုလိုက်တယ်
ဟုတ်ပီ နင်နှင့်ငါ သံပြိုင်အော်ဆိုရအောင်
ကိုယ့်အမြှီးကို ပြန်မြိုမိသော မြွေ
Posted on Wednesday, 14 November 2012
တစ်ခါတစ်ခါ ဘာမှမဟုတ်ဘူး ကိုယ့်အတွေးနှင့်ကို မိုးချုပ်ခဲ့
တစ်ခါတစ်ခါ ဘာမှမဟုတ်ဘူး ကိုယ့်ခြေရာနှင့်ကို တိုင်ပတ်နေခဲ့
တစ်ခါတစ်ခါ ဘာမှမဟုတ်ဘူး ကိုယ့်ဒဏ်ရာနှင့်ကို
တစ်ခါတစ်ခါ ဘာမှမဟုတ်ဘူး ကိုယ့်ဖန်ခွက်နှင့်ကို အလွမ်းတွေကိုမော့သောက်ခဲ့
တစ်ခါတစ်ခါ ဘာမှမဟုတ်ဘူး ကိုယ့်ရင်ဘက်နှင့်ကို ခံစားနေမိခဲ့
တစ်ခါတစ်ခါ ဘာမှမဟုတ်ဘူး ကိုယ့်မျှော်လင့်ချက်နှင့်ကို မောပန်းခဲ့
တစ်ခါတစ်ခါ ဘာမှမဟုတ်ဘူး ကိုယ့်ရမ္မက်နှင့်ကို လောင်မြိုက်ပြစ်ခဲ့
တစ်ခါတစ်ခါ ဘာမှမဟုတ်ဘူး ကိုယ့်မျှော်လင့်ချက်နှင့်ကို ခွတ်ထိုးခွတ်လန် ရယ်မောခဲ့
တစ်ခါတစ်ခါ ဘာမှမဟုတ်ဘူး ကိုယ့်အနာဂတ်နှင့်ကို အိမ်မက်တွေမက်ခဲ့
တစ်ခါတစ်ခါ ဘာမှမဟုတ်ဘူး ကိုယ့်ပါးစပ်နှင့်ကို လူမုန်းခံခဲ့
တစ်ခါတစ်ခါ ဘာမှမဟုတ်ဘူး ကိုယ့်အသိနှင့်ကိုယ် သမာဓိဆောက်တည်ခဲ့
တစ်ခါတစ်ခါ ဘာမှ မဟုတ်ဘူး. ကိုယ့်လျှာကိုယ်သွားနဲ့ကိုက်ခဲ့
တစ်ခါတစ်ခါ ဘာမှမဟုတ်ဘူး ကိုယ့်ဖိနပ်နှင့်ကို အိမ်မက်တွေကို ချနင်းခဲ့
တစ်ခါတစ်ခါ ဘာမှမဟုတ်ဘူး ကိုယ့်နှလုံးသားနှင့်ကို
Posted in ထိရှအက်ကွဲသံ |2Replies
Cancer နှင့် သူမ လွန်ဆွဲတဲ့ပွဲမှာ ကျွန်တော်က တတိယမြောက် ဖဲတစ်ချပ်
လှလှပပ ငါ့ကိုတန်ဆာဆင်သွားပြီလား ????
ခန္ဓာချုပ်မဲ့ရက်က သက်မှတ်ပြီးသား ။ ။
မင်းရဲ့ နား နားကပ်ပီး
“ မေနို ” လို့တစ်ခွန်းလောက် ခေါ်ခွင့်ရချင်သေးရဲ့ ။ ။
ငါ့အသွေးအသားထဲက ထွက်သွားပါ ကင်ဆာ
ငါ့ခွန်အားတွေကို မင်းစုပ်ယူသောက်သုံးခဲ့ပီးပီပဲ ကင်ဆာ ။ ။
ကောင်မလေးရေ ဝိဥာဉ်ရယ် ဝေဒနာရယ်
ငါ့ဝိဥာဉ်ကို ဖမ်းဆုပ်ရမှာလား ........???
ငါ့ဝေဒနာကိုပဲ ပြန်ဆွဲယူရမှာလား မေနို ။ ။
မှောင်ညို့နေတဲ့ ငါ့ညတွေနှင့် အပြိုင်
အလွမ်းတို့ ပြိုဆင်းနေတာ ခုချိန်ထိမတိတ်သေးဘူး ။ ။
ပူပြင်းလိုက် လောင်ကြွမ်းလိုက်နှင့် လွင်တီးခေါင် ။ ။
ဒီလိုနှင့် ငါသောက်နေတဲ့ ဆေးတွေက ငါ့ကိုပြန်သောက်ခဲ့ ။ ။
ဒီလိုနှင့် ငါ့ညနေခင်းတွေဟာ ငါ့ကိုပြန်လွမ်းခြုံခဲ့ ။ ။
ငါ့ကမ်းပါးမှာ ရပ်ပေးပါ မေနို ”
ငါ့ဆုတောင်းကို ငါ့ဘာသာပြန်ရွတ်ဆိုခဲ့ ။ ။
ငါ့ပစ္စပ္ပန်မှာ ကြယ်ငွေ့တွေ လင်းပွင့်သွားသလိုမျိုး
“ ဝုန်း ” ကနဲ ရှင်ပြန်ထမြောက်ချင်လို့ပါ မေနို ။ ။
Posted in ထိရှအက်ကွဲသံ |3Replies
နင်စိုက်ပျိုးခဲ့တဲ့ အမုန်းပန်းတွေ စောစောပွင့်သင့်တယ် မေနို
Posted on Sunday,9September 2012
ထွေးထုတ်လိုက် မြိုချလိုက် ။ ။
ဟောဒီဖုန်းဆိုးမြေမှာ ဆူးရိုင်းတို့အလီလီပွင့်ခဲ့ပီ ။ ။
မှန်တဲ့ဘက်မှာ နင်ရပ်တည်ခဲ့တာပဲ မေနို
ငါသာလျှင် ကျဆုံးမှုတံဆိပ်နှင့်ထိုက်တန်တာပါ မေနို
သိပ်တောင်နောက်ကျနေတယ် မေနို .... ။ ။
Posted in ထိရှအက်ကွဲသံ | 8 Replies
အဓိပ္ပါယ်တွေ အလှပဆုံးသိမ်းသွင်းထားတဲ့ စကားလုံးများနှင့်
အနုပညာလျှပ်စီးအားကို လက်နှင့်ဖမ်းဆုပ်ပြတယ် ။ ။
ဟင်းလင်းဖွင့်ပြစ်လိုက်တယ် ။ ။
သူ့ဝိဥာဉ်ကိုပါ ဖဲ့ချွေပီး အသက်သွင်းတယ် ။ ။
ခေါ်ဆောင်သွားတယ် ။ ။
မျက်လှည့်ပွဲ တစ်ခုကဲ့သို့အစီအစဉ်တကျ ခင်းကျင်းပြသတယ် ။ ။
စကားလုံးသစ်လွင်မှုတွေကို တူးဖော်တယ် ။ ။
အချိန်ကာလတွေ ကျိုးကြေနေအောင်ကို ရင်ဘက်နှင့်ရင်းပီး
စကားလုံးစီးစီးပိုင်ပိုင်တစ်ခုတွေ့အောင် တူးဖော်တယ် ။ ။
တစ်ချက်တစ်ချက် ဖြတ်သွားဖြတ်လာ လူတွေရဲ့
ပုခုံးနှစ်ဖက်ကြားက ပေါက်နေတဲ့ အိမ်မက်တွေကို
နှိုက်နှိုက်ပီး စကားလုံးတွေကို တူးဖော်ယူတယ် ။ ။
သူ့ကိုသူ ကဗျာဆရာလို့ မမြည်အောင်ကို တူးဖော်တယ် .............
ကဗျာဆရာဟာ သူ့ကိုယ်သူပြန်တူးဖော်မိသွားတယ် ။ ။
သူ့ကိုယ်သူ ပြန်ရှာတွေ့သွားတယ် ။ ။
(မှတ်ချက် ။ ။ ကျွန်တော် ကဗျာဆရာမဟုတ်ပါ ကဗျာဆရာယောင်ဆောင်ထားသော သာမန်လူသာဖြစ်သည် )
အဖြူထည်သက်သက်ဖြစ်သွားတယ် ။ ။
ပကာသနတွေက ခဏခြင်းသေဆုံးသွားတယ် ။ ။
အသွေးအသားထဲထိ စိုက်ကျ ။ ။
ကြောက်ခမန်းလိလိ ။ ။
သက်တန့်ရယ် ကောင်းကင်ရယ် ကျွန်တော်ရယ် မျဉ်းပြိုင်ရယ် သူမရယ်
Posted on Wednesday, 25 July 2012
မှုံမှိုင်းမှိုင်းကောင် ။ ။
သူမရဲ့ ခြုံလွာတစ်ခုကို ဖမ်းဆုပ်လိုက်တယ်
ငါတို့နှစ်ယောက်ဟာ မျဉ်းပြိုင် ............
ရှင်သန်နေရတာ မောဟိုက်လှတယ် မေနို
ငါတို့နှစ်ယောက် ထိတွေ့ကြမယ် ။ ။
Posted in ထိရှအက်ကွဲသံ | 10 Replies
Posted on Saturday, 21 July 2012
မပျံ့လွင့်ရင် သံသရာလဲ အငြိမ် ...................
Posted on Wednesday, 11 July 2012
ချစ်ခြင်းတရားကို မိုက်ကမ်းကမ်းဆုပ်ကိုင်ထားတယ် ၊
အမုန်းတွေ ဖြတ်ဖြတ်မလျှောက်ပါနှင့် ။ ။
Posted in ထိရှအက်ကွဲသံ |5Replies
Posted on Sunday, 24 June 2012
ရွာချစမ်းပါ ။ ။
ဟိမ်းမြည်လိုက်စမ်းပါ ။ ။
ပိန်းပိတ်အောင် ရွာချလိုက်စမ်းပါ ။ ။
ငါကတော့ ဒီနေရာကနေဘယ်တော့မှ မရွေ့ဘူး ။ ။
နည်းနည်းနာကျင်ရမှာပေါ့ မဟုတ်ဘူးလားဗျာ ..........
နာကျင်မှုကို ရစ်မှုးနေတဲ့ ဘုရားသခင် ဒဏ်ခတ်ခြင်းခံနေရတဲ့ကောင်
ငါ့ချစ်သူမှ ဟုတ်ပါလေစလို့ ကိုယ့်ဘာသာ
ဘုရားသခင် ခွင့်မပြုတဲ့ အသီးကိုမှ
တရှိုက်မက်မက် စားသုံးမိတာ ။ ။
ပန်းခြောက်လေးလဲ မြတ်နိုးမယ် ။ ။
( ခုတစ်လော ကျွန်နော် ကဗျာရေးဖို့အတွက် အာရုံတွေ ထုံမှိုင်းနေလို့ ဟိုးကလေးသားလေးတုန်းက ရေးခဲ့ဖူးတဲ့ ကဗျာတစ်ပုဒ် တင်လိုက်ပါတယ် ၊ ကလေးသားလေးထဲက ကျွန်နော် ကဗျာတွေစရေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ် (ကြွားဝါခြင်းမဟုတ်း) ဒီကဗျာကို ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရေးခဲ့တာလား ဘယ်ကဗျာဆရာရေးခဲ့တာလဲ မမှတ်မိပါ ၊ ဒါပေမယ့် ခုချိန်ထိ စာလုံးတွေကို ထင်ထင်ရှားရှား စွဲလမ်းမှတ်မိနေလို့ ပြန်တင်လိုက်တာပါ ၊ မူရင်းကဗျာဆရာသိရင်တော့ ကွန်မန့်မှာသာ ဝင်ခြစ်သွားပေတော့း)
Posted in ကဗျာ | 10 Replies
ကဗျာစပ်နေတုန်း စိတ်ကောက်သွားတဲ့သူမကြောင့် မရေးဖြစ်တဲ့ ကဗျာ
ဟော သူမ စိတ်ကောက်သွားပြန်ပီ ။ ။
သူမရဲ့ လင်းပွင့်နေတဲ့ စိတ်ကူးလေးတွေကို
သူမ စိတ်ကောက်သွားပြန်ပီ ။ ။
Posted on Sunday, 27 May 2012
ကြယ်စင်တွေ သူ့ဟာသူကြွေကျတယ်။ ။
ရေတံခွန်တွေ သူ့ဟာနှင့်သူပြိုကျတယ်။ ။
စိန်ပန်းပွင့်တွေ တဖျက်ဖျက်ပွင့်တယ်။ ။
ပန်းတွေပွင့်ကြတာ မဟုတ်ဘူး ။ ။
အငမ်းမရ တမ်းတမက်မော မနေပါနှင့်
ကိုယ့်မှာလည်း သစ္စာတရားတွေ တမြိုင်မြိုင်ထ
ဖြူလွှလွှ သံယောဇဉ် ခုံတန်းလေးပေါ်မှာ
အချစ်စစ်တွေ ငါ့ရင်ထဲမှာရှိတယ် ။ ။
သက်တန့်ရောင်စုံတွေကို ရေတွက်နေဖို့မလိုဘူး ။ ။
ဒို့လက်ကို အခုတွဲ ကန့်လန့်ကာတွေ အမြန်ဖွင့်
တိုက်ပွဲဝင်လိုက်ရအောင်ပါ ။ ။
Posted on Monday, 14 May 2012
သင်္ခါရ ဘယ်အရာမှ မမြဲသော
သုံးသပ်နိုင်မှုအပေါ်မှာ မူတည်တယ် ။ ။
ဒါပေမယ့် အနိုင်လိုချင်မှုကိုတော့ ကိုယ့်ဘာသာ
သွားမထိနှင့် လေးစားမှုတွေကြေကွဲသွားမယ် ။ ။
(သူမရှိရင်လဲ သိပ်မလေးနက်ပြန်ဘူးဗျ )
တိုးတိုးပြော ကံကောင်းမှုတွေ လန့်ပြေးကုန်မယ်
ကဗျာဆရာရဲ့ နှလုံးသားက လောင်းရိပ်ကင်းမှ
စကားလုံးတွေ ကြွထလာတာ ........................ ။ ။
Posted on Wednesday, 18 April 2012
ငါကိုယ်တိုင်တောင် ချစ်ခြင်းတရားကို မသိဘူး
အရေပြားတွေ ထူပိန်းနေအောင်ကို ဟန်ဆောင်ခဲ့တာ
အပီးသက်မှာ ဟန်ဆောင်ခြင်းသာ မောလျှလို့
ငါတို့တွေ လက်ပန်းကျအောင် ဟန်ဆောင်ပီး
ငါနင့်ကိုမုန်းတယ် မေနို ။ ။
Posted in ထိရှအက်ကွဲသံ |6Replies
ဘယ်လို ဆည်တုပ်ထားရမလဲဆိုတာ .....................?
ဖြေဆေးတွေက ပပျောက်စေသလဲဆိုတာ .......................?
မရမ်းချောင်းအလှုပြီးစီးခြင်း မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများနှင့် ဗွီဒီယိုဖိုင်(2)
Posted on Saturday,7April 2012
ဆက်ပါအုံးမယ်ခင်ဗျား။နှင်းဆီရင်ခွင်အဖွဲ့သားတွေ ပြောသလို ပြောရရင်တော့ မြန်မာပြည်က အလှုဓါတ်ပုံများ ကျွန်တော်တို့ဆီရောက်အောင် ပို့နိုင်ဖို့ “မီးးးးစက် လိုပါတယ်ခင်ဗျား”။တစ်ခုကောင်းရင် တစ်ခု ဆုတ်ယုတ်တဲ့ ဓမ္မတာအရ မီးလည်း လာရော လှည်းတန်းက ဂုံးကျော်တံတားတည်ဆောက် ရာမှာ ဒီနေ့ပဲ မြေတွေတူးတယ်လို့ သိရပြီး အင်တာနက်လိုင်း ထပ်မံပြတ်တောက်ပါတယ်။အကယ်၍ ကျွန်တော်မနက်ဖန်မှာ အလှုစာရင်းရှင်းတမ်း မတင်ပေးနိုင်သေးရင် သည်းခံပြီး ခဏစောင့်ပေးကြပါအုံးလို့ အလှုရှင်များအား မေတ္တာရပ်ပါတယ်။
Posted in နှိုးဆော်စာ | 1 Reply
မရမ်းချောင်းဂေဟာအတွက်အလှုလေး လုပ်ကြမယ်လို့ စပြီးတိုင်ပင်တဲ့အချိန်က ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ရရှိလာနိုင်တဲ့ အလှုငွေကို ခန့်မှန်းခဲ့ကြရာမှာ ၇သိန်းဝန်းကျင်လောက်ပဲ ဖြစ်ဖို့များတယ်ဆိုပြီး ကျွန်တော်တို့ ကောက်ချက်ချခဲ့ ကြတယ်။အဲ့တာလေးနဲ့ ဆန်အိတ် လေး ငါးအိတ်လောက်ရယ်၊ ၀ှီးချဲလ်လေး နှစ်စီးလောက်ရယ်နဲ့ ပိုတာလေးကို ပဒေသာပင်ထဲထည့်မယ်ဆိုပြီး ဒီအလှုလေးကို အုတ်မြစ်စချတယ်။တကယ်လည်း အလှုခံလို့ပြီးရော ကျွန်တော်တို့ လက်ခံရရှိခဲ့တဲ့ပမာဏက ကနဦး ကျွန်တော်တို့ခန့်မှန်းထားခဲ့တာထက် ခြောက်ဆကျော်လောက် ရရှိခဲ့တယ်။ မရမ်းချောင်းက ဝေဒနာ-ရှင်တွေရဲ့ ကံတရားကောင်းမှုကြောင့်ရယ် နိုင်ငံအရပ်ရပ်က အလှုရှင်တွေရဲ့ တိုင်းတာမရနိုင်တဲ့ သဒ္ဒါတရားတွေကြောင့် ကျွန်တော်တို့ဟာ ဒီအလှုငွေတွေနဲ့ မရမ်းချောင်းဂေဟာရဲ့ လက်ရှိလိုအပ်နေတဲ့ အရာလေးတွေ (ဂေဟာက တောင်းဆိုလာသလောက်အကုန်)ကို ဖြည့်ဆည်းနိုင်ခဲ့ တဲ့အပြင် ပိုလျှံနေတဲ့ အလှုငွေတွေကိုပါ ရာသက်ပန် ပဒေသာပင်ထဲ ထည့်ပေးနိုင်ခဲ့ပါပြီ။စိတ်ကြည်နူးမိတယ်၊ ပီတိဖြစ်မိတယ်ဆိုတာထက် အဆပေါင်းများစွာ ရင်ထဲမှာဖြစ်နေတာကို စာစီပြလို့ မရနိုင်ပါဘူး။မနက်ကလည်း အစောကြီး အလုပ်ထဲကထွက်ပြီး ဒီနေ့မှာ သွားပြီးလှုပေးမဲ့ အဖွဲ့တွေကို မေတ္တာပို့ပြီး ဖုံးဆက်တယ်။သူတို့ တက်ကြွနေတဲ့ အသံတွေကို ကြားမိတော့ ကြက်သီးတွေတောင် ထမိတယ်။
Posted in နှိုးဆော်စာ |2Replies
အလောင်းဘယ်တော့မှ မလှတဲ့ ဈာပန
Posted on Tuesday,3April 2012
ဘယ်တော့မှ အလောင်းမလှဘူး ။ ။
Posted on Saturday, 31 March 2012
အုံးအုံး မြည်သံ ၊ ဒုံးဒုံး ကွဲသံ
ဖုန်းဖုန်း ခေါ်သံ ၊ တုံးခနဲ လဲသံ
တဗြုံးဗြုံး ထုရိုက်သံ ၊ ကတုံးကို ပြန်တုံးသံ
မိုးလင်းမိုးချုပ် ခပ်သုတ်သုတ်ရွေ့လျှားသွားတဲ့ တဏှာတွေ
ပါးပါးလျှလျှ အငွေ့ပျံသွားတဲ့ အထိမ်းအမှတ်ကျောက်တိုင်တွေ
အနေမတတ် အထိုင်မတတ်တဲ့ စုန်းပြူးတစ်ကောင်ရဲ့
သုညဖြစ်သွားတဲ့ ရာဇဝင်အကြောင်းစာတမ်းပြုထားတယ် .........။ ။
“ ဖျောင်း ” ကနဲပဲ
နှလုံးခုံသံတွေ မရှိတော့တာလေးပါ ။ ။
ငါဟာ ငါ့ရင်ကိုမှ အလွမ်းတွေနှင့်အက်ကွဲစေသူ
ငါဟာ တိတ်တိတ်လေးအိမ်မက်ထဲမှာလဲ လွမ်းတတ်တဲ့သူ
ငါ့ညတွေမှာ သတိယမှုတွေ တွန့်ကြေခဲ့ပေါ့........
ငါဟာ အလွမ်းတွေကို ခါးဆောင်းတင်ပီး
ဘယ်နှစ်ရက်တောင် ဖြတ်သန်းရအုံးမယ် မသိဘူး မေနို ။ ။
Posted on Thursday, 22 March 2012
ဟိုးအဝေးကြီးကို ( ငါ့ကိုတောင် မနှုတ်ဆက်ဘူး )
နင်ဟာ ငါမခူးရက်ခဲ့တဲ့ နှင်းဆီဖြူ ။ ။
Posted on Wednesday, 21 March 2012
ဆိတ်သုဉ်းခဲ့ပီ ။ ။
Posted on Thursday, 15 March 2012
ကျွန်တော်ဟာစိတ်ကူးယဉ်ဖို့ မလွယ်တော့သောအရွယ် ဒဏ်ရာစုံပိုက်လို့ အသည်းကွဲဖို့လည်း… ……..ကြောက်နေတတ်သောအရွယ် ဒါပေမယ့် မမြင်ဖူးတော့အများထက်ပိုရူးခဲ့တယ်..အချစ်စစ်ဆိုတာကိုပေါ့
အကြိမ်ကြိမ်ဆုံးရှုံးခဲ့သော မျှော်လင့်ချက်တိုင်းမှာ….သစ္စာတရားတွေပါ လွင့်သွားပေမယ့် အကင်းမသေတဲ့ချစ်ခြင်း အမှန်တခုအတွက်….နောက်ဆုံးအခကြေးအဖြစ် အသည်းစားကြေးဆိုခဲ့ကြလည်း မိုက်ရူးရဲစွာ….လိုက်..ပါ..သွား..ခဲ့..တယ် ။ ။
ခင်ဗျာ… ဗီလိန်…. ဗီလိန်လုပ်ရမှာလား………..ဒါဆို….ဟို..အသဲကွဲမိုး ရေးသလို
ဗျာ….ဒဿ လိုလည်း လွမ်းခန်း ဖွင့်ရမယ်…
ကျွန်တော်……….အပီလွမ်းမယ်ဗျာ…. ဒါပေမယ့်.. သူက..လွမ်းတေးးးးးးးးး…. ရောကြားပါ့မလား???
က မယ်ဗျာ….တစ်ပင်တိုင် မဟုတ်ရင်ပြီးရော…………
က တယ်….လှတာမလှတာအပထား…သူ အနား ရှိနေပေးရင်ပြီးတာပဲ……………………..
ကျွန်တော်…မမောဘူး…ကျွန်တော် က နေတယ်…… ဘာအက တွေမှန်းသေချာမသိဘူး…
ကျွန်တော် က နေခဲ့တယ်…… မင်းသား..အနားမရောက်လာဘူး…..ဒါပေမယ့်
ကျွန်တော် က နေတုန်းပဲ….သူ…လာပါ…လိမ့်မယ်………ကျွန်တော် က နေဆဲ……….
.ဒီ လို နဲ့..ပဲ
သူ့ရင်ဘတ်မှာလည်း ဒဏ်ရာတွေ….ပြဲ ကျန့် နေတာ…မြင်မကောင်းဘူးဗျာ……ဘယ်လိုလုပ်
ဒါ..ကျွန်တော်လည်း..ဘယ်လို က က သူ့လိုသေ ရမှာပဲဆိုတဲ့သဘောလား….တခုခုပြော..
မသိချင် ရဘူး ??? အဖြေ မရှိဘူး???….ကျွန်တော်ဆက် က ရမှာလား……..လဲကျ ရတော့မှာလား
ကျွန်တော် က တာအားပေးမလို့…
သြော်..ဟုတ် ၊ ရတယ် ကောင်းတာပေါ့..ခင်ဗျား လက်ပန်းမကျနဲ့…
ကျွန်တော့်ကိုကြည့်..ကျွန်တော် က ပြ မယ်နော်… အခုတယောက်ထဲ က နေတာဆိုပေမယ့်
ဇာတ် သိမ်း က နှစ်ပါးသွားဗျ…ကျွန်တော့် မင်းသား အလှပြဖို့..ပြင်ဆင်နေတာ…ဖြစ်မှာ…
လက်ဖျစ်တီးတယ်…..( တ၀က်တပျက် )
ချွေးသိပ်ပေးနေသလိုပဲဗျာ…. အဆင်ပြေလာတယ်…. ဟုတ် ကျွန်တော် က နေတာကို အားပေး
တဲ့သူနှင့် …လက်ခုတ်သံက အရောင်မဲ့ပေမယ့်..ကျွန်တော့်မှာတော့..ပွဲကြည့်ပရိတ်သတ်နဲ့
တဖွဲ့တနွဲ့ က …
နည်းနည်းလေးတော့ အမောပြေ တယ်ဗျာ… တခါတခါလည်း.. ထ ထ အော်ပေးတယ်…
က ထား..မင်းသားလေး လှတယ် တဲ့…. တော်တော်တော့ကြာနေပြီ
ကျွန်တော် မျှော်နေတဲ့ မင်းသား…ဘယ်နားမှာ…သွားနား နေပါလိမ့်…..မလာသေးဘူး
ဒီမှာလည်း…အစကတည်းကမကောင်းတဲ့အသည်း အလွမ်းတွေနဲ့ ဆက်သ
က နေရတာ များလွန်း…………. ကြာလွန်းလို့……မောပန်းချိနဲ့နေပါပြီ…
ခင်ဗျာ.. သူ့ညီမလေးက စာမေးပွဲတဖက်နဲ့မို့…..
ဘာ…တကယ်က..ကျွန်တော့် မှာ အားပေးပရိတ်သတ်ရှိနေလို့…
ဟမ်….ကျွန်တော်….ဘယ်လို ဆက်လုပ်ရမှာလည်း….ကျွန်တော် ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလည်း…….??????
ပရိသက်ကြောင့်ဆို……ဘယ်မှာလည်း ကျွန်တော်နောက်တယောက်….ကျွန်တော် လိုက်ရှာတယ်…. ကျွန်တော် လိုက်ရှာတယ်……. ကျွန်တော်….ရှာ……ခဲ့…တယ်
သူ ဈာပန ချ တဲ့ပွဲမှာ အသံတောင် ပေးမသွားရှာဘူးသေပြီ….
သေတမ်း စာ ငွေ့ငွေ့လေးက လှလှပပ ပြုံးပြ….သူ့သဘင်သည်လေး က ခဲ့တာ..
မင်းသားတယောက်ထဲ…အတွက်မို့…သူနောက်တယောက်ဖြစ်တဲ့ ကျွန်တော် အသည်းမကွဲစေဖို့
ရှင်းပြ ပေး ခဲ့ တယ်…….
ပရိတ်သတ် သေ ပြီ…သဘင်သည် ကျွန်တော်လည်း အရူး လို ပဲ သွေးပျက်ခြောက်ခြား....
သေနိုင်လောက်တဲ့ အချစ်မီးတွေ ၀ိုင်း လို့… ……..အနှုတ်သက်သက်ပဲပြ ရက်စက်တဲ့ စကားတွေ..ထပ်ကြား..ကြားနေလည်း…အသည်းကို လည်ဆင်းဆက်သ…ဒီမောင်မှ..မရရင်ဖြင့်
ဒီသဘင်သည်ရူးရချည့်ရဲ့ဆိုကာ..ရင်ဘတ်ကို ဟက်တက် ခွဲ… ဒူးလည်းထောက်..ဦးလည်းညွှတ်
မြေကြီးမှာ ခတွားကာ….ခစားခွင့်ရဖို့…အရူးရူး..အနှမ်းနှမ်း ထူးဆန်းထွေလာထဲကလို
သိက္ခာကိုအရည်ဖျော်…မာန တွေခ၀ါချပြစ်ခဲ့တယ်……..ဒါပေမယ့် မင်းသားက မဲ့ပြုံးတောင်..ပြုံးမပြဘူး…….
သွားပြီ………….ဒီပွဲကို ဇာတ်ဆရာတောင် သနားနေပြီ….
လောကကိုအမှောင်ချ အချိန်ကို အနားပေးလိုက်တဲ့ ခဏမှာသဘင်သည်လေး.. ကျွန်တော်ခေါင်းငိုက်စိုက်ကျ
ပရိတ်သတ်အသေလည်း ပြာ လိုလွင့်မျော….
ဇာတ်ဆရာ….ပြောတဲ့ နှစ်ပါးသွားပုံပြင်လည်း..တိမ်တိုက်တွေလို ကြေမွ..
ကျွန်တော့် အသက် ကို ဓားနဲ့ စိုက် ခွဲ
အနာဖေးတွေ…..တစစနဲ့ အကုန်ကွာကျ.. အတိတ်မှ..လက်ရှိဘ၀တိုင်…..
ခိုင်မြဲခဲ့သောအစွဲအလမ်းတွေက ဂုဏ်သိက္ခာတွေအားလုံးကို အနိုင်ယူ ချ နင်း ခံခဲ့ရသော..
ပြခဲ့သော… က ကြိုးတွေ
ကျရှုံးလို့ နိမ့် ဆင်း သွား ပြီ
ပစ္စုပ္ပန် အနာဂတ်.နဲ့…သံသရာတိုင်း အတွက်….. အချစ်ကို အပြီးအပိုင် ဆွဲထုတ်ပြစ်ခဲ့တယ်။ ။
( မိုးဇက်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က မိုးဇက်အတွက်ရေးပေးတာလေးပါ ...... )
Posted in ပို့မော်ဒန် |6Replies
တခုတ်တရ မျှော်လင့်နေတဲ့ စိတ်ကူး
Posted on Tuesday, 13 March 2012
ယုံကြည်မှုက ယုံကြည်မှုကို ဖွင့်ဖွင့်သောက်နေရ
ကိုင်းလက် ဖူးပွင့်တွေ လွန်လို့
ဒီနှင်းစက်တွေကို မ၀ံ့ မရဲငံ့လင့်လိုက်နဲ့
ရွာချလိုက်တော့ ။ ။
Posted on Friday,9March 2012
ငါ့ကို တံတွေးနှင့်ထွေးသွားလှည့်ပါ ၊
ငါ့လည်ပင်းကို မလှီးသွားပါနှင့် ။ ။
Posted on Thursday, 8 March 2012
မြန်မာမုဒိတာလူငယ်များအဖွဲ့၏ ဒုတိယမြောက်အလှုအဖြစ် မရမ်းချောင်း အနာကြီးရောဂါသည်ဂေဟာကို ဧပြီလပထမပတ်တွင် လိုအပ်သည်များကို တတ်နိုင်သလောက် လှုဒါန်းရန် စီစဉ်ထားပါတယ်ခင်ဗျား။အလှုငွေ ရရှိမှု အပေါ်မူတည်ပြီး ၁။ငွေသားအလှု ၂။ဆေး၊ ဆန်အလှု ၃။အ၀တ်အထည် ၄။၀ှီးချဲ များကို အလှုငွေ ရရှိတဲ့အပေါ်မူတည်ပြီး လှုဒါန်းနိုင်ဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ်။ပါဝင်အားဖြည့် လှုဒါန်းလိုသူများအား ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့မှ လှိုက်လှဲစွာ ကြိုဆိုပါတယ်ခင်ဗျား။
မရမ်းချောင်း အနာကြီးရောဂါသည် စောင့်ရှောက်ရေးဂေဟာအကြောင်း
ရန်ကုန်တိုင်း၊ လှည်းကူးမြို့ နယ် ဖောင်ကြီးအလွန်မှာ ဂေဟာ တပည်ရှိပါတယ်။လက်ရှိ ဂေဟာက စောင့်ရှောက်ထားသူ ဝေဒနာသည် ကျား ၅၇ဦး၊ မ ၄၆ဦး စုစုပေါင်း ဝေဒနာသည် ၁၀၃ဦး ရှိပါတယ်။
ဝေဒနာရှင်တွေဟာ မနက်စောစော ဘုရားဝတ်တက်ကြတယ်။ပြီးရင် စောင့်ရှောက်ရေးဂေဟာက ဆန်(၇)ပြည်လောက် ချက်ထားတဲ့ ထမင်းကို ဆီငါးကျပ်သား တစ်ဆယ်သားလောက်ထည့်ပြီး ကြော်ထားတဲ့ထမင်းကို ကျွေးပါတယ်။အလှုရှိတဲ့နေ့ဆို အသားဟင်းနဲ့ သူတို့စားသောက်နေကြပုံက အလွန်ကို အားရစရာ ကောင်းလှပါတယ်။အလှုရှင် မရှိတဲ့နေ့ဆိုရင် သူတိုပတွေဟာ ပြုတ်မနူးပဲ၊ပြုတ်နူးပဲတွေကို အရည်ကျဲချက်လိုက်၊ ကုလားပဲဟင်းလို ချက်လိုက်နဲ့ မျိုးစုံချက်ကျွေးတာနဲ့ပဲ စားကြရပါတယ်။ညစာကိုလည်း စောစောကလို စားအပြီးမှာ မြေစိုက်တဲ ဓမ္မာရုံကိုသွားကြပြီး တရားနာခြင်းအမှုကို ပြုကြပါတယ်။
တစ်နှစ်ပတ်လုံး ဝေဒနာသည်တွေ နှစ်ကြိမ်ပဲ စားခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတဲ့ ဒံပေါက်ထမင်း
ဆရာဝန်လာတဲ့ ရက်တွေမှသာ ဆေးခန်းပြခွင့်ရှိပါတယ်။လက်ရှိ အချိန်မှာ တိုင်နယ်ဆေးရုံလေးက ဆရာဝန်လေးဟာ ဆယ်ရက်တစ်ခေါက်သာ ရောက်ဖြစ်တယ် ပြောပါတယ်။အချိန်ပြည့် blue staff တစ်ယောက် ရှိပေမဲ့ လက်ရှိ လူနာအင်အားနဲ့က တော်တော့်ကို ကွာခြားနေပါတယ်။
သူတို့တွေရဲ့ ခြေချောင်းတွေဟာ တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အတိုအရှည့် မညီကြပါဘူး။ဒါ့ကြောင့် သူတို့တွေအတွက် အထူးပြုလုပ်ထားတဲ့ ဖိနပ်တွေ စီးကြရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ အဲဒီ အထူးပြုလုပ်ထားတဲ့ ဖိနပ်ကိုလည်း တစ်ခါတစ်လေသာ လှုဒါန်းမဲ့သူ ရှိပါတယ်တဲ့။အဲလိုအချိန်မှာတော့ ခြေထောက်မှာ ဖြစ်နေတဲ့ အနာရောဂါတွေဟာ သက်သာလေ့ရှိပါတယ်။ဖိနပ်ပြတ်သွားပြီး လှုဒါန်းမဲ့လူမရှိရင်တော့ လက်ရှိ အများစီးနေတဲ့ ဖိနပ်တွေကို ကြိုးတွေဆိုး ဖြတ်ညှပ်ပြီး စီးနေကြရပါတယ်။
အနာကြီးရောဂါသည် ခံစားခဲ့ရတဲ့လူတွေဟာ သာမန်လူတွေပဲ ဖြစ်တာမို့ အိမ်ထောင်ပြုနိုင်ကြသလို သားသမီးတွေလည်း ထွန်းကား ကြပါတယ်။သူတို့မှာ ဝေဒနာရဲ့ ဖိစီးမှုတွေကြောင့် ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေနဲ့ ခံစားကြရပေမဲ့ အနာကြီးရောဂါဆေး သောက်ထား တာကြောင့် မွေးလာတဲ့ သားသမီးလေးတွေမှာတော့ ရောဂါကင်းကြပါတယ်။သူတို့ သူတို့လေးတွေဟာလည်း မှီတွယ်စရာ ဂေဟာလေးမှာ နေထိုင်ရင်း အလှုရှင်တွေရဲ့ လှုဒါန်းမှုကို မျှော်လင့်ကာချို့ တဲ့စွာ ဖြတ်သန်းနေကြရပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ ဘာ့ကြောင့် သူတို့ကို ကူညီသင့်သလဲ
အနာကြီးရောဂါသည်များကို အရပ်ထဲမှာ (မရိုသေစကား) အနူလို့ ခေါ်ဝေါ်ကြပါတယ်။လူတောထဲ အ၀င်မခံ ရွံကြပါတယ်။ရောဂါ ကူးမှာ ကြောက်ကြပါတယ်။ရောဂါသည်တွေ ကိုယ်တိုင်ကလည်း လူတွေကြားထဲ မသွားရဲ မလာရဲ အမြဲတမ်း စိတ်အားငယ်နေကြ ပါတယ်။အနာတစ်ခုဖြစ်ရင် လွယ်လွယ်နဲ့ မပျောက်ပဲ အဆိုးဆုံး အခြေအနေထိ ခံစားရပြီး ဖြတ်တောက်ပစ်ရပါတယ်။အနာကြီးရောဂါ ကုသဆေး သောက်ထားကြလို့ ကူးစက်နိုင်ခြင်း မရှိကြတော့ပေမဲ့ နောက်ဆက်တွဲဝေဒနာတွေက မရှုမလှပါဘူး။ ခြေလက်တွေဟာ ထုံနေကြပြီး ခြေထောက်ကို သံစူးရင်တောင်မသိနိုင်ကြပဲ ပေါင်မှာအကျိတ်ခိုလာမှ အနာရှိလောက်တယ်ထင်ပြီး ဖြဲရှာရတဲ့ဘ၀တွေပါ။တစ်ချို့ တွေဆို ဘီးတပ် ကုးလားထိုင်ပေါ်မှာပဲ ဘ၀ကို ကုန်ဆုံးနေရပါတယ်။
ဂေဟာမှ ဝေဒနာသည် အဖွားအရွယ်တစ်ဦး
အဲဒီဝေဒနာရှင်တွေဟာ အရင်က ကျွန်တော်တို့လို လူကောင်းတွေပါပဲ။ကံတရား၊ စိတ်၊ ဥတု၊ အဟာရမမျှတမှုတွေကြောင့် အရွယ်ာမျိုးစုံမှာ အနာကြီးရောဂါကို ခံစားခဲ့ကြရင်း လူတောမတိုင်းနိုင်တဲ့အထိ ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ကူညီသည့်သူများကို အားကိုးရင် အသက်ဆက်နေရသူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိ အဆိုပါ ဝေဒနာရှင်းများအတွက် လှုဒါန်းနေသူများ ရှိကြသော်လည်း လှုဒါန်းမှုအားမှာ ဆင်၏ ခံတွင်းကို နှမ်းပက်သလို အရမ်းကို အားနည်းနေပါသေးတယ်။
ဆေးထည့်တဲ့အခါ ခြေထောက်တင်တဲ့ခုံကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် လိုအပ်မှုတွေကို ထင်သာ မြင်သာစေပါတယ်။
ထိုသူတွေအတွက် ဆန်၊ဆီ၊ဆေး၊အ၀တ်အထည်၊ ၀ှီးချဲများ တကယ့်ကို လိုအပ်နေပါတယ်။အလှုရှင်တွေ လိုအပ်နေပါတယ်။ အကယ်၍ စိတ်ပါဝင်စားစွာ လှုဒါန်းလိုသူများအနေနဲ့ မိမိတို့ နေထိုင်ရာ နိုင်ငံအလိုက် အောက်ပါ အကျိုးတော်ဆောင်များထံ ၂.၄.၂၀၁၂ နောက်ဆုံးထားပြီး ဆက်သွယ် လှုဒါန်းနိုင်ကြပါတယ်ခင်ဗျား။
အရှင်ဇနက(သန္တိသုခ) venjanaka@gmail.com +၄၄ ၇၇၄၀ ၉၈၃၉ ၄၂
ဗညားရှိန်@လင်းခေတ်ဒီနို lynnkhitdeno301@gmail.com +၁၂၀ ၁၈၈၈ ၉၇၅၁
၁။ကိုငြိမ်းနိုင် @ ကိုနိုင်ထွဋ် eikunaing@gmail.com +၆၅ ၉၀၂၂ ၁၈၀၇ +၆၅ ၉၈၈၂ ၉၀၇၈
၂။ကိုရင် + မဒမ်ကိုး celestial.whiteangle@gmail.com +၆၅ ၈၃၇၅ ၁၀၆၉
ပစ်ပစ် @ ဂျယ်ရီပစ်ပစ် +၈၈၆ ၉၃၀ ၄၁၃ ၂၂၀ jerrypigpig@gmail.com
၁။ဇင်ငြိမ်းဦး(မြန်မာ အိုင်တီနန်းတော်) +၆၀ ၁၇၇၀ ၅၈၂ ၁၉
၂။လွင်ပြင်လှိုင်းငယ်+မစံပယ် (Sunway) lwinpyinhlaingnge@gmail.com +၆၀ ၁၄၆၆ ၃၀၁ ၇၃
၃။မောင်(စွယ်စုံကျမ်း) (Kalang) zwmnna@gmail.com +၆၀ ၁၆၃၂ ၄၉၆ ၉၁
bloggermoses@gmail.com +၆၀ ၁၄၇၂ ၄၅၄၀၂
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မိခင်ဆိုဒ်အား ဒီနေရာမှာ သွားရောက် လေ့လာနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျား
Posted in နှိုးဆော်စာ |3Replies
တိတ်ဆိတ်သောသီချင်းတစ်ပုဒ်ကို သူမနှင့်ကျွန်တော် ရွတ...
Cancer နှင့် သူမ လွန်ဆွဲတဲ့ပွဲမှာ ကျွန်တော်က တတိယေ...
နင်စိုက်ပျိုးခဲ့တဲ့ အမုန်းပန်းတွေ စောစောပွင့်သင့်တ...
သက်တန့်ရယ် ကောင်းကင်ရယ် ကျွန်တော်ရယ် မျဉ်းပြိုင်ရယ...
နာကျင်မှုကို ရစ်မှုးနေတဲ့ ဘုရားသခင် ဒဏ်ခတ်ခြင်းခံနေရ...
ကဗျာစပ်နေတုန်း စိတ်ကောက်သွားတဲ့သူမကြောင့် မရေးဖြစ်...